मकर राशीमा शनिको महाप्रस्थान, साढे साती शुरु, तपाईको राशीमा कस्तो पर्छ असर ? – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं: ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास राख्नेहरुलाई आज विशेष दिन रहेको छ । आज ग्रहहरुको चालमा हुने परिवर्तन ऐतिहासिक रहेको छ ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार, आज शनि राशी आफ्नै मकर राशिमा प्रवेश गर्न गइरहेको छ । मकर राशिमा शनि बिराजमान हुँदा त्यसको तृतीय दृष्टि मीनमा, सप्तम दृष्टि कर्क मा र दशम् दृष्टि तुलामा रहनेछ ।
योसँगै आज देखि २९ सेप्टेम्बरसम्म शनी बक्री चालको अवस्थामा रहनेछन् । अस्त र बक्रीको अवस्थामा फलमा कमी आउँछ र काममा ढिलाई हुन्छ ।
नेपाल, भारतलगायतका देशका लागि बक्रीको स्थिति त्यति शुभ मानिएको छैन । उथलपुथल हुनसक्ने र राजनीतिमा पनि उतार चढाव हुने देखिन्छ । देशको व्यवसायिक र आर्थिक अवस्थामा अस्थिरता देखिन सक्छ ।
शनिको स्थान परिवर्तन कुन राशीका लागि कस्तो त ?
मेश राशी र लग्न भएका व्यक्तिहरुलाई शनि दशम भावबाट भ्रमण गर्ने भएकोले व्यापार व्यवसायमा उन्नती हुनेछ । जागिर भएकाहरुलाई लाभ देखिनेछ । नवीन कार्ययोजना बन्नेछन् । बेरोजगारलाई रोजगार पाउने सम्भावना बलियो छ । पारिवारिक र दाम्पत्य जीवनमा पनि अनुकूल अवस्था देखिनेछ । बाहिरी मामिलाहरुमा केही सावधानी अपनाउनु पर्ला । विवाहको योजना भएकालाई विवाह हुने योग छ ।
वृषभ राशि र लग्न भएकाहरुका लागि शनि नवौं भावबाट मकरको शनि गोचर भ्रमण गर्नेछ । भाग्यमा बृद्धि हुनुका साथए पिताको सहयोग पनि पाइनेछ । व्यवस्थायमा प्रगति र जागिरमा सुखद अवस्था रहने देखिन्छ । शत्रु परास्त हुने र ार्थिक लाभको अवस्था पनि छ । स्वास्थ्य राम्रै रहनेछ ।
मिथुन राशी र लग्न भएकाहरुका लागि शनिको गोचर आठौं अष्टम भावबाट हुने भएकोले प्रारम्भबाट नै करिब सवा वर्षसम्म निकै कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । काममा ढिलाई हुने देखिन्छ । ढैया पनौती शुरु भएको छ । तनाव हुनसक्ला । तर नातासम्बन्धीबाट सहयोग पाउँदा धनसम्बन्धी विषयमा भने केही राहत पाइनेछ । सन्तान पक्षबाट सहयोग मिल्नेछ । स्वास्थ्य भने ठीकै रहनेछ । विद्यार्थी वर्गका लागि समय सुखद देखिन्छ ।
कर्क राशि र लग्न भएकाहरुका लागि दाम्पत्य जीवनमा अनुकुलता रहनेछ । दैनिक व्यवसाय पनि उत्तम रहने देखिन्छ । स्वास्थ्यको दृष्टिबाट उत्तम र समय तपाईको पक्षमा रहने छ । पारिवारिक कुरामा सहयोगसँगै प्रसन्नता रहनेछ । घर र जग्गासम्बन्धी विषयमा राम्रो देखिन्छ । जीवनसाथीसँग महत्वपूर्ण सहयोग पाइने देखिन्छ । बाहिरी सम्बन्ध र धन खर्च गर्दा पनि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सिंह राशि र लग्न भएकाहरुका लागि मकरको शनि षष्ट भावबाट गोचर भ्रमण गर्दैछ । शत्रुहरुको नाश हुने र कर्जाबाट मुक्ति पाइने देखिन्छ । यात्राको योग देखिन्छ । बाहिर पढन जानेहरुका लागि सफलता देखिन्छ । पराक्रममा बृद्धि हुने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा मनमा द्विविधा आउन सक्ने हुँदा कुनै पनि नयाँ काम गर्दा सबै पक्ष विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ । साझेदारीको काममा लाभ देखिन्छ ।
कन्या राशिका लागि शनीको गोचरीय भ्रमण पाँचौ भावमा रहेको छ । ढैया पनौती समाप्त हुँदा धन र पुरस्कार पाइने सम्भावना बढी छ । सन्तान पक्षबाट सहयोग देखिन्छ । लामो समयदेखि चलिरहेको तनावबाट मुक्ति पाउने देखिन्छ । श्रीमतीसँग सामान्य मनमुटाव भएपनि सुखद अवस्था सिर्जना हुनेछ । विद्यार्थी वर्गका लागि राम्रो हुनुका साथै आयको अवस्था पनि ठीकै छ । तपाईको बोली नै तपाईको मुख्य सम्पत्ति भएको हुँदा बोलीमा नियन्त्रण राखेर अगाडि बढनु भयो भने शनिको यो अवस्था तपाईका लागि निकै लाभदायी हुनेछ । महत्वपूर्ण काममा सफलता पाइनेछ ।
यो राशि र लग्न भएकाहरुका लागि मकरको शनि चौथो स्थानमा गोचर गर्ने छ । पारिवारिक समस्याको समाधान हुने । घरको आशा पुरा हुने देखिन्छ । प्भावमा बृद्धि हुने देखिन्छ । पनौती (ढैया) प्रारम्भ भएकोले कुनै पुरानो रोग फेरी बल्झिन सक्छ, त्यसैले सावधानी आवश्यक छ । धन हानी तर यश पढने देखिन्छ ।
यो राशिका लागि पराक्रममा यथेष्ट वृद्दि हुने देखिन्छ । अहिले शनि तृतीय भावमा छन् । यसबाट भाग्यमा अनुकूल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यात्राको योग देखिन्छ । धन प्राप्ती तथा सन्तानको सुख पाउने सम्भावना बलियो छ । स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । परिवारलाई बढी समय दिनुपर्ने र बाहिरी सम्बन्धहरुबाट टाढा रहनु वेश हुनेछ ।
मकरको शनि दोश्रो भावमा भएको हुँदा भाईहरुको सहयोग पाइने देखिन्छ । आमाको स्वास्थ्यमा पनि अनुकूलता रहनेछ । धनुमा यसअघि नै साढेसाती शुरु भएको हुँदा अब डेढ वर्ष बाँकी रहेकोले पारिवारिक कलह र मतभेद हुनसक्छ । तर उत्तरार्ध या पछिको समय निकै राम्रो छ ।
मकर राशिमा नै शनि आएको कारण दाम्पत्य जीवनमा सुखद वातावरणका साथै धनको बचत हुने देखिन्छ । स्वराशिमा भएको कारण शनिले कष्ट दिने छैन । तर मानसिक तनाव भने हुन सक्छ । पदोन्नतीको योग हुनुका साथै सन्तान पक्षबाट सुखद समाचार पाइन सक्छ । मनलाई नियन्त्रणमा राखेर व्यवहार गर्नुभयो भने तपाइका लागि समय शुभ छ ।
कुम्भका लागि शनि १२ औं भावमा रहने छ । आजदेखि नै यो राशीमा साढे साती शुरु हुने भएको छ । साढे साती भएपनि केही आलस्य बढने तर आर्थिक लाभ देखिन्छ । मध्यम दूरीको यात्रा बारम्बार हुने देखिन्छ । ऋणको अवस्थाबाट मुक्ति पाइने, रोकिएका काममा सफलता पाइने देखिन्छ । जागिरमा पदोन्नती या स्थानान्तरण सम्भव देखिन्छ ।
मीनका लागि शनिका आय भाव एकादशमा भ्रमण गर्ने भएकोले आर्थिक स्थितिमा सुधारमा अर्थलाभ पाइनेछ । विद्यार्थीका समय उत्तम छ । सन्तान पक्षसँग सहयोग मिल्ने भएकोले राहत पाइनेछ । स्वास्थ्यको दृष्टिबाट समय ठीक नै भन्न सकिन्छ । यश बढने देखिन्छ ।
ट्याग्स: राशी, साढे साती